iPhone ကို XR ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “iPhone XR review: Apple’s cheaper battery king” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, for theguardian.com on Wednesday 31st October 2018 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
The rounded aluminium sides are less slippery than the stainless steel of the iPhone XS, but don’t feel quite as lovely in the hand. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
The increased screen size and larger bezels makes it 4.5mm wider than the iPhone XS, but 1.7mm narrower than the iPhone ကို XS မက်စ်, which with its rounded edges makes the iPhone XR right on the limit of what I am able to use one-handed. Those with smaller hands will struggle. The iPhone XR is also wider than rivals such as the 6.1in Huawei P20 Pro, 6.2တွင် Samsung Galaxy S9+ or the 6.4in ဟွာဝေး Mate 20 Pro ကို.
Screen ကို: 6.1in Liquid Retina HD (LCD ကို) (326ppi)
processor: Apple က A12 Bionic
သိုလှောင်ခြင်း: 64, 256 or 256GB
ကင်မရာကို: OIS ပါသော 12MP အနောက်ကင်မရာများ, 7အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: LTE ကို, ကို Wi-Fiac, NFC ကို, ဘလူးတုသ် 5, လျှပ်စီးနှင့် GPS
ဒိုင်မန်းရှင်း: 150.9 x က 75.7 x က 8.3 မီလီမီတာ
The iPhone XR doesn’t have gigabit LTE but it does have symmetrical grilles in the bottom of the phone. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Battery life on the other hand is all-round better than both the iPhone XS and XS Max, which lasted 24 နှင့် 27 hours respectively. The iPhone XR lasted over 32 စွဲချက်အကြားနာရီ, matching last year’s iPhone X, meaning it would make it froma7am wake up alarm until around 3pm the next day.
That was while using it as my primary device, sending and receiving hundreds of emails, မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်သတိပေးချက်များတွန်းအားပေး, နားကြပ်ကို Bluetooth နားကြပ်တွင်ငါးနာရီနားထောင်ပါ, Netflix ၏တစ်နာရီစောင့်ကြည့်, နှင့်ရိုက်ကူး 10 တစ်နေ့ဓာတ်ပုံများ.
iOS ကို 12 is pretty much the same no matter which phone you run it on, just with gestures on the iPhone XR just like the iPhone X, XS and XS Max. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
The iPhone XR runs iOS 12 and is identical to the iPhone XS, complete with အကြောင်းကြားစာကိုင်တွယ်အုပ်စုဖွဲ့ နှင့် ဘက်ပေါင်းစုံသာယာဝပြောရေးကိရိယာများ ဒါကြောင့်စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုကိုသင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်.
The camera app is the same except for the lack of the 2x optical zoom button from the iPhone XS – pinch to digitally zoom up to 5x. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ထိုနည်းတူ, portrait shots of people are good withamuch wider angle than that produced by the iPhone XS, but you have to get closer to your target for the face detection to work properly and produce the effect. You’re also limited to shooting people and it lacks some of the more advanced lighting effects.
ယေဘုယျအား, the cameras on the iPhone XR are really good andamassive step up on the iPhone7သို့မဟုတ်အထက်, but not the best available onasmartphone.
Face ID works just as well on the iPhone XR as its siblings. The red dot here is invisible to the human eye, but shows the IR dot projector that enables the 3D scanning system. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဖုန်းအားလျင်မြန်စွာအားသွင်းရန်အတွက် USB-C သို့ Lightning cable လိုအပ်သည်, ဒါပေမယ့်သူမနဲ့သဟဇာတ charger ကိုမ box ထဲမှာမပါဝင်ပါ
ကြိုးမဲ့အားသွင်းသည်ကြီးလှ၏, ဒါပေမယ့်အားသွင်းနေချိန်မှာအိုင်ဖုန်းကတော်တော်လေးများပါတယ်, ပြိုင်ဘက်ဖုန်းတွေထက်ပိုပါတယ်
The iPhone XR is available in black, အဖြူ, ပြာသော, yellow, coral and red, ကုန်ကျ £749 with 64GB of storage, £799 with 128GB and £ 899 with 256GB.
နှိုင်းယှဉ်, the 64GB iPhone XS ကုန်ကျစရိတ်များ £ 999, the 64GB iPhone ကို XS မက်စ် ကုန်ကျစရိတ်များ £ 1,099, the 128GB Huawei P20 Pro ကုန်ကျစရိတ်များ £ 669, the 128GB ဟွာဝေး Mate 20 Pro ကို ကုန်ကျစရိတ်များ £900, Samsung Galaxy S9 ကုန်ကျသည် £ 639 and the 128GB OnePlus 6T costs £469.
The iPhone XR does last longer than the other 2018 အိုင်ဖုန်း, and it comes in some stunning colour options. If you must buy an iPhone but can’t or won’t spend £999 or more, the iPhone XR is the smartphone for you.
အကောင်းအဆိုး: good camera, ရေစိမ်ခံနိုင်သော, ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, Face ID, ကောင်းသောဘက်ထရီသက်တမ်း, ကောင်းသောမျက်နှာပြင်
Cons: နားကြပ်ပေါက်မပါ, လက်ဗွေစကင်နာမရှိပါ, ကျဆင်းသွားပါကဖန်ကိုချိုးဖျက်လိမ့်မယ်, စျေးကြီး, သေတ္တာထဲ၌အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းစက်သို့မဟုတ် USB-C cable မရှိပါ, box ထဲမှာအဘယ်သူမျှမနားကြပ် adapter
The single camera lump on the back of the iPhone XR sticks out far enough to cause the phone to rock around onatable. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
← ဟွာဝေး Mate 20 Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 6T ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း OnePlus →